Headset: Mpilalao mozika mivezivezy avy amin'ny YouTube sy Reddit | Avy amin'ny Linux
Ny fironana fanjifana atiny amin'ny endrika streaming isan-taona dia miha malaza hatrany izy io, ary ankehitriny miaraka amin'ny vokatry ny fitokana-monina sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina Valan'aretina covid-19, bebe kokoa aza.
Ary eo amin'ny sehatry ny fihinanana mozika an-tserasera, YouTube, azo raisina a tranomboky mozika tsy manam-petra. Izay no antony, mihamaro hatrany ny rindranasa (mpilalao) noforonina an-tserasera na birao hohanina atiny mozika an-tserasera, toy ny "Headset".
Eo amin'ny sehatry ny mozika nataon'i streaming amin'ny alàlan'ny YouTube manokana, "Headset" miavaka amin'ny maha-maivana, tsotra ary mandeha amin'ny asany mpilalao mozika amin'ny alàlan'ny streaming, loharano misokatra sy multiplatform, izay mamela antsika, ankoatry ny zavatra maro, handingana ny fanelingelenana fanaovana dokambarotra momba ny atiny henoina.
Na izany aza, alohan'ny hidirany "Headset" Tsara ny manamarika fa, tamin'ny fotoana hafa, efa niresaka zavatra hafa isika mpilalao mozika mitovy amin'izany, izany hoe, ny loharano misy ny atiny dia an-tserasera amin'ny alàlan'ny streaming, toy ny "Nokleary", izay fariparitray fohifohy amin'ny fotoana anaovan'izy ireo izao manaraka izao:
"Nuclear dia mpilalao mozika mivantana mivelatra ao amin'ny GitHub ambanin'ny lisansa "Affero GPL", ary eo ambanin'ny filozofia fampandrosoana izay fantatra amin'ny anarana hoe "GNU / Linux First", izay midika fa manaja ny fahalalahantsika ny fampiharana, manome antsika fidirana feno mankany amin'ny kaody loharano , mba hahafahantsika manova azy sy mandray anjara amin'ilay tetikasa. Ny teny fampiasa ôfisialy ho an'ny fampiharana amin'ny tranokala ofisialiny dia mivaky fa i Nuclear dia mpilalao mozika maoderina mifantoka amin'ny fandefasana endritsoratra maimaim-poana." Nokleary: mpilalao mozika mivantana
Ny mahaliana hafa dia:
MellowPlayer: mpilalao mozika mivantana
Harmony: mpilalao kanto ary mifanaraka amin'ny rindranasan'ny rahona
1 Headset: Desktop Player ho an'ny Linux
1.1 Inona no atao hoe Headset?
1.3 Misintona, mametraka ary Screenshot
Headset: Desktop Player ho an'ny Linux
Inona no atao hoe Headset?
Araka ny anao tranokala ofisialy, voafaritra fohifohy toy izao manaraka izao:
"Headset dia mpilalao mozika birao entin'i YouTube sy Reddit."
Na izany aza, ao aminy tranokala ao amin'ny GitHub farito bebe kokoa toy izao manaraka izao:
"Headset dia mpilalao mozika tsotra ho an'ny Mac, Windows, ary Linux miaraka amina fikarohana ao anaty YouTube, efijery an-trano miaraka amin'ny lisitra lazain'ny karazana sy ny fotoana, ary ny tsara indrindra dia ny onjam-peo ampiasain'i Reddit. Headset dia mandray hira izay zarain'ny sub-reddit mozika mihoatra ny 80, manasokajy azy ireo ary milalao azy ho azy. Izy io dia fomba mahafinaritra sy miavaka hitadiavana mozika vaovao satria olona hafa toa anao no mifidy azy fa tsy amin'ny algorithma."
Izy io dia multiplatform: Azo alaina ho an'ny Windows, Linux (Debian, Redhat) ary MacOs. Izy io aza dia azo aorina avy amin'ny kaody loharano amin'ny tontolo voajanahary.
Lohahevitra 2 no hita: Misy lohahevitra 2 hita maso: Maizina sy Mazava. Ary tsy ho ela dia hampiditra ny azy manokana sy manokana.
Fampidirana amin'ny Last.fm: Ahafahanao miditra amin'ny tsindry iray miaraka amin'ny serivisy mozika sosialy malaza. Mizaha ireo hira misy ary omeo ny safidy hanovana ny vaovao.
Fifandraisana tsy miankina sy azo antoka: Mampanantena fa ny angon-drakitra rehetra, ny mari-pahaizana ary ny cookies dia ampitaina amin'ny alàlan'ny fifandraisana SSL azo antoka, hitazomana ny data rehetra tsy ho hita eo amin'ny tambajotra.
Loharano misokatra: Mba hiantohana ny filaminana sy ny fitoniana, ny ampahany betsaka amin'ny loharano Headset dia mitazona hatrany.
Fifanarahana amin'ny rahona: Ao anaty rahona ny zava-drehetra tantana, ka amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana fotsiny dia tafaverina daholo ireo mozika tantana. Mba hampifanarahana ny kaonty amin'ny kaontin'ny mpampiasa YouTube an'ny mpampiasa iray dia tsy maintsy arahana ity manaraka ity dingana.
Misintona, mametraka ary Screenshot
Ny kinova farany misy azy dia laharana 3.3.0 ary aorian'ny fisintomana, amin'ny tranga misy anay ao endrika ".deb", ary apetraka miaraka "Apt" na "dpkg", "Headset" toa izao:
Izaho manokana dia tiako be dia be, satria izaho aza mihaino fitsaharana doka, avy amin'ny atiny, tsy mozika fotsiny, fa avy amin'ny atin'ny YouTube, ohatra, Fantsona amin'ny lozisialy maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux izay matetika hitako. Ary izy rehetra tsy mila miditra amin'ny fampiharana, izay ilaina ihany raha sendra misy te hampiasa ilay menio fananganana sy ny safidy fifandraisana y tiany.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Headset», kely sy mahasoa mpilalao mozika atiny an-tserasera an'ny YouTube sy Reddit, loharano misokatra sy multiplatform, izay ahafahantsika manadino ireo fanelingelenana dokam-barotra; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Headset: Mpilalao mozika mivezivezy avy amin'ny YouTube sy Reddit
Manodidina ny 17 ny faharefoana sy ny lamosina hita tao amin'ny fitaovan'ny FiberHome